BBC Somali - Warar - Doorashada Guddoomiyaha oo socota
Doorashada Guddoomiyaha oo socota
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 28 Agoosto, 2012, 11:37 GMT 14:37 SGA
Doorashada Guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay ka socotaa magaalada Muqdisho.
Wareeggii koowaad ee doorashada ayaa dhamaatay goor dhaweyd.
Waxaa codeeyay 236 oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, waxaa codadkoodu halaabeen laba.
119 Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari,
77 Cali Khaliif Galeydh,
23 Cabdi Xaashi Cabdullaahi,
10 Cabdirashiid Maxamed Xiddig iyo
5 Xasan Abshir Faarax.
Waxaa hadda la galay wakhti dhextaal ah oo mudanayaashu ku soo qadeeyaan, kadibna waxaa bilaabanaya wareegga labaad oo loo gudbayaa, waxaana isugu soo haray Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari iyo Cali Khaliif Galeydh.
Doorashada ayaa guud ahaan waxaa u tartamayay shan xubnood oo kala ah.
Cabdi Xaashi Cabdulllaahi
Cali Khaliif Galeydh
Maxamed Cismaan Jawaari iyo
Waa markii ugu horreysay ee muddo ka badan labaatan sano lagu qabto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Kala soco halkan wararka ugu dambeeya ee doorashada.